Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo u diiday sarkaal ka socda Haya’adda Article19 inuu Dhaafo Airport-ka
Itobiya oo u diiday sarkaal ka socda Haya’adda Article19 inuu Dhaafo Airport-ka
Posted by ONA Admin	/ April 15, 2014
Itobiya waxay waligeed ahayd sanduuq xidhan oo caalamka ka qarsoon waxa ka socda gudaheeda. Waxaan la soconaa siduu caalamka uga fajacay qarnigii tagay markii lasoo saaray sawiradii abaaraha ka dhacay 1983-85. Waxaa caalamka ka fajiciyay siday uga qaarisay Itobiya caalamka intiisa kale abaaraha iyo macaluusha ka dhacday halkaa ilaa uu saxafiga Kenya u dhashay Maxamad Amin ee caanka ku noqday sawiraduu kasoo qaaday uu damiirka caalamka gilgilay. Waa iyadii loo gurmaday Itobiya oo xataa fanaaniintii ay u kaceen. Gobolka ugu daran abaaraha ee Mingisto uu ka qariyay caalamka wuxuu ahaa Tigree, waana qawmiyadda maanta sidii Mingisto iyo ka daran kula dhaqmaysa shucuubta ay ka midka yihiin Somalida Ogadenya. Xukuumadii Itobiya ka talisa kolba dadaalkeeda ugu badan waxay galisaa inay albaabada u xidhato dadka ku nool halkaa oo aan caalamka kale ogaanin dhibaatada haysata.
3exdii Bishan April ayaa Airport-ka Addisababa lagu xayiray nin ka socday Ha’adaa Caalamiga ah ee Article19 oo ah Haya’adda kali ah ee ku hadhay inay ka shaqayso Itobiya ka dib markii laga soo wada saaray haya’dihii xuquuqul insaanka.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Patric Mutahi oo Nairobi ka ambabaxay ayaa Airport-ka lagu hayay 29 saacad ka dibna dib loogu soo celiyay halkuu kasoo ambabaxay isagoo digniin lagu siiyay haduu ku soo noqdo Itobiya in jeelka ladhigi doono. Haya’dda Article19 ayaa sheegtay intuu ku xidhnaa halkaa in loo diiday inuu cidna la xidhiidho oo laga qaaday Mobile-ka iyo Kombutarkuu watay, isla markaana loo diiday inuu helo latalin sharci yaqaan. Waxay u sheegeen in lala socday dhamaan socdaaladisii hore iyo dadkuu qaabilay intaba iyo meelaha uu tagi jiray, taasoo muujinaysa inay tahay Itobiya dawlad booliisi (Police State) oo dadka jooga oo dhan lawada ilaalinayo.
Hay’adda Article19 waa haya’ad Xuquuqul Insaanka u dooda oo fadhigeedu yahay London. Waxaa la asaasay 1987, waxuuna hadafkeeda 1aad yahay Horumarinta inuu Caalamka ka hirgalo Xoriyadda fikirka, odhaahda iyo Is-dhaafsiga Xogta. Magaca haya’dda ee Article19 waxay kasoo qaadatay Cahdiga Xuquuqul Insaanka Caalamiga ah ee QM qodokiisa 19aad oo dhigaya sidan;
“Qofkasta wuxuu xaq u leeyahay Xoriyadda Fikirka iyo Odhaahda; Xaqaa waxaa ka mid ah Xoriyadda qofka inuu fikirkuu doono qaato isagoon la-qasbin iyo inuu Raadsado, helo, La-wadaago Xogta iyo Fikradiisa isagoo adeegsanaya warbaahinta aan la xanibin .. ( Everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers.)
Hawlaha uu halkaa u tagay Patrick waxaa ugu muhiimsanaa inuu tababar u furo saxafiyiinta Itobiya isla marahaantaana isagoo kaashanaya Bulshada Rayidka (Civil Society) Itobiya ay soo sameeyaan qiimeyn ku saabsan xaaladda Xuquuqul Insaanka Itobiya Afartii sanee lasoo dhaafay. Xukuumadaha ku tanta xuquuqda shucuubtooda ayaan warbixin usoo gudbinin Qaramada Midoobay ku saabsan xaaladda Xuquuqda Aadanaha ee dalkooda, taaasoo kalifta in Haya’daha Gaarka ah loo adeegsado. Halkan ka akhri haya’ddan waxay qabato: